MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardဧပြီ 2018 - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
ရေရှားပါးမှုဒဏ် ခံစားနေရသည့် ညောင်ဦးရှိဒေသခံ ကျေးရွာနေပြည်သူများသို့ MPT က စက်ရေတွင်း လွှဲပြောင်းပေးအပ်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၅ရက်) – MPT က “နှလုံးသားထဲက မြန်မာ” လူမှုအကျိုးပြုလှုပ်ရှားမှု လုပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်ရှိ လက်ပံပင်တဲတိုက်၊ ညောင်ပင်ကန်ကျေးရွာတွင် ဒေသခံများသို့ စက်ရေတွင်းလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ MPT ၏ “သန့်ရှင်းပြည့်ဖြိုးရေအကျိုး” အစီအစဉ်သည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရေရှားပါးမှုဒဏ်ကို တွေ့ကြုံခံစားနေရသည့် ဒေသခံများအတွက် ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ရေလှောင်ကန်များ
တည်ဆောက်ပေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ပြီး ရည်ရှည်တည်တံ့သည့် သောက်သုံးရေရရှိနိုင်ရေးကို လုပ်ဆောင်နေသည့် အစီအစဉ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ညောင်ဦးမြို့နယ်ရှိ ဒေသခံပြည်သူများအနေဖြင့် ယခင်ကထက် ရေကို ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ သုံးစွဲလာနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္ဍတွင်လည်း ပိုမိုတိုးတက်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ MPT အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း ကောင်းမွန်သော လူနေမှုဘဝကို ရရှိ ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရန် အစဉ်ရှေးရှုဆောင်ရွက်လျက်ရှိသကဲ့သို့ နိုင်ငံသားတိုင်း၏ ဘဝနေထို်င်မှုအတွက် အရေးပါသည့်ကူညီထောက်ပံ့မှုများကိုလည်း အစဉ်တစိုက် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ အဆိုပါရေအကျိုးပြုလုပ်ငန်း
ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ(INGO) နှင့် ကျေးလက်ဒေသတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန တို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
“သန့်ရှင်းပြည့်ဖြိုးရေအကျိုးအစီအစဉ်” ၏ ပထမဆုံးအကြိမ် ရေတွင်း၊ ရေကန်များတူးဖော် လှူဒါန်းခြင်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ငွေကျပ် သိန်းပေါင်း ၂၅၀၀ ကို အသုံးပြုကာ ရေတွင်း၊ရေကန် (၁၅) ခုကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ ပါသည်။ ယခုနှစ်တွင်လည်း “သန့်ရှင်းပြည့်ဖြိုး ရေအကျိုးအစီအစဉ်” တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း လူမှုအကျိုးပြု အစီအစဉ်အတွက် MPT က မြန်မာကျပ်ငွေသိန်း(၂,၀၀၀) ကို အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ရေရှားပါးသည့် ဒေသများ၏ ရေအခက်အခဲများကို ကူညီဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ MPT အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတာဝန်ရှိသူများအပြင် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွေဲ ဆာင်ရွက်နေပြီး Network Activities Group (NAG) ၊ Bridge Asia Japan (BAJ) တို့နှင့်အတူ လှူဒါန်းမှုများကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်လာစေရန် အသေအချာဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
MPT သည် ယခုစီမံကိန်းများ အခြေပြုလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည့် ရပ်ရွာများအတွက် သိသာသည့် အပြောင်းအလဲများကို ဖြစ်ပွားစေရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး ရေရှည်တည်တံ့ပြီး ဒေသခံများကိုယ်တိုင်ပံ့ပိုး ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် အနေအထားအထိ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် ပမာဏမပြောင်းလဲနိုင်သည့် မြေအောက်ရေ အရင်းအမြစ်များကို ရယူနိုင်ရန်အတွက် အဆိုပါ ရေတွင်းများမှာနက်ရှိုင်းစွာ တူးဖော်ဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုအစီအစဉ်၏
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် MPT နှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ကျေးရွာတစ်ခုစီအလိုက် တူးဖော်ပေးခဲ့သည့် စက်ရေတွင်းများ ရေရှည်တည်မြဲရေးအတွက် ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးတွဲလုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်စက်ရေတွင်း တည်တံ့စေရေးနှင့် ရေရှည်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ရန်အတွက် ကော်မတီတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ထားကာ ယခုလိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် အထူးသဖြင့် ဒေသခံအဖွဲ့များအနေဖြင့် ယခုလို အများပိုင်စက်ရေတွင်းကို
ကောင်းစွာ ထိန်းသိမ်းနိုင် မည်လည်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Operating Officer ဖြစ်သော Mr. Yoshiaki Benino က “ရေဆိုတာ အသက်ပါပဲ။ ဒီလိုအသက်တမျှ အရေးကြီးလှတဲ့ ရေအရင်းအမြစ်ကို ဒေသခံတွေက လိုအပ် နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် MPT ကနေပြီး နိုင်ငံအနံ့အှ ပြားက ရေလိုအပ်နေတဲ့ နေရာများတွေကို ကူညီ ထောက်ပံ့ဖို့အတွက် “သန့်ရှင်းပြည့်ဖြိုး ရေအကျိုး အစီအစဉ်” ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်တွင်းက ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ ဖြစ်တာနဲ့အညီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နှလုံသားဟာလည်း ပြည်သူလူထုနဲ့ထပ်တူ ရှိနေပြီး ဒေသခံ တာဝန်ရှိ သူတွေ၊ NGO အဖွ့အဲ စည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ရေလိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ သန့်ရှင်းတဲ့ သောက်သုံးရေရဖို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံကို ရှေ့ကိုလှမ်းချီနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
MPT အနေဖြင့် အထက်ပါ စီမံကိန်းကို ယခုနှစ်တွင် မန္တလေးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း(အနောက်ပိုင်း)၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ် နှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ MPT သည် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အနီးကပ်ဆောင်ရွက်လျက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက် လိုအပ်ချက်နှင့် အသုံးပြုမည့်အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ယင်းသို့သော မိတ်ဖက်အဖ့အွဲ စည်းများအပြင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနင့်အတူ
ပူးပေါင်းကာ ရေအရေးတကြီး လိုအပ်နေသည့် နေရာများသို့ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ MPT သည် အခြေခံ ရေအရင်းအမြစ်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိစေရန်နှင့် ရေရှည် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းများ၊ ရေတွင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ စသည်တို့ကို ၎င်း၏မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသခံပြည်သူများနှင့်အတူပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ MPT ၏ “သန့်ရှင်းပြည့်ဖြိုး ရေအကျိုး အစီအစဉ်” သည် ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲစေမည့်အသွင်ကို စဉ်းစားပြီး သေချာစွာ ရေးဆွဲထားသော နည်းဗျူဟာများပါ၀င်ခြင်း၊ အနာဂတ်တွင် ရေကို လုံလောက်စွာရရှိစေရန် စီမံချက် ချမှတ်ထားခြင်း၊ ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ရန် မည်ကဲသို့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမည် စသည့် အချက်အလက်များကိုပါ ပါဝင်အောင် ဆောင်ရွက်ထားခြင်းတို့မှာ MPT နှင့် အခြားရေရရှိမှု အစီအစဉ်များ အကြား ကွာခြားချက်များဖြစ်ပါသည်။
လက်ပံပင်တဲတိုက်၊ ညောင်ပင်ကန်ကျေးရွာမှ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်လင်းက “ အဓိက က လက်ပံပင်တဲတိုက်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ လူဦးရေ ၃၀၀ နီးပါးအတွက် ဒီရေဟာ မရှိမဖြစ်အရေးတကြီး လိုအပ်ပါတယ်။ MPT ဌာနကအခုလို ရေလာရောက်တူးဖော်တဲ့အတွက် အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာရပါတယ်။ ရွှေကိုမလို ရေကိုပဲလိုတဲ့ အရပ်က ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသပါပဲ။ အရင်ကမြစ်ရေကိုပဲ ဂါလံ ၅၀ ရဖို့ တစ်နေ့ကို ၂ နာရီ ၃နာရီ အနည်းဆုံး အချိန်ယူ သွားခပ်ရပါတယ်။ မြစ်ရေဖြစ်တဲ့အတွက် သုံးရေပဲ ရတယ်။ သောက်ရေအတွက်က သပ်သပ်ဝယ်ရပါတယ်။ သောက်ရေအတွက်က စျေးကြီးတော့ တစ်ချို့ဆို မဝယ်နိုင်ကြပါဘူး။ အခုတွင်းရေက ချိုးရေအပြင် သောက်ရေအတွက်ရော ရတဲ့အတွက် အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ MPT နဲ့ MPT ဝန်ထမ်းတွေကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုလိုကူညီပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဒေသခံတွေ ငွေရော၊ အချိန်ကုန်ရော သက်သာသွားပါပြီ။ သီးသန့်ဝယ်စရာမလိုတော့ဘူး။ အခုရေတွင်းရပြီဆိုတော့ ဒီအနီးနားကို ပြန်လာနေကြတော့မယ်။” ဟုပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးနှင့် ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သော MPT အနေဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုဆောင်ရွက်ပေးနေသည်သာမက ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စွန့်ဦးတီထွင်နှင့် လုပ်ငန်းငယ်ကဏ္ဍဖြွ့ံဖိုးရေး အစရှိသည်တို့အပြင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အစရှိသည့် ကဏ္ဍများအထိ ကျယ်ပြန့်သော လူမှုအကျိုးပြုအစီအစဉ်များကို ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအနှံအပြားတွင် ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီများ၌ ရေရရှိရန် အခက်အခဲဖြစ်နေသည်ကို သိရှိခဲ့
ရပြီး ရေအရင်းအမြစ် ရရှိနို်င်သော်လည်း လုံလောက်သည့် သိုလှောင်ကန်နည်းစနစ် သို့မဟုတ် မြေအောက်သိုလှောင်ကန်စနစ်အား တူးဖော်တည်ဆောက်ရန် ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း၊ တည်ဆောက်ရန် ခက်ခဲခြင်း အပြင် စျေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်းနှင့် ကြုံတွေ့နေသည်ကိုလည်း သိရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် MPT သည် ပူပြင်းခြောက်သွေ့သော ကာလများအတွက်ပါ စိတ်ချ ယုံကြည်ရသော ရေအရင်းမြစ် တူးဖော်ပေးခြင်းနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ရေအရင်းမြစ်ရရှိမှု ဖြစ်စေရေးအတွက် မိမိတို့၏ နှလုံးသားထဲမှခံယူချက်ဖြင့်
ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရန် စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဧပြီ 25, 2018 ဧပြီ 25, 2018 Categories CSR Activitiesmm, Latest Newsmm, Press Releasesmm
ယခုရက်သတ္တပတ်မှ စတင်ကာ The Voice Myanmar ပြိုင်ပွဲအတွက် မဲပေးစနစ်သစ် MPT က ထုတ်ပြန်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၃ ရက်) – မြန်မာ့ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ MPT က လက်ရှိတွင် ရေပန်းစားနေသည့် The Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ၏ လာမည့်ပွဲစဉ်များအတွက် မဲပေးရမည့် စနစ်သစ် ကို ယနေ့သတင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ MPT ကို အသုံးပြုနေသည့် The Voice Myanmar ပရိသတ်များ အနေဖြင့် လာမည့် တိုက်ရိုက်သီဆိုယှဉ်ပြိုင်မှု ပွဲစဉ်များကို အွန်လိုင်း Web Portal ဖြစ်တဲ့ thevoice.mptvote.com မှ တစ်ဆင့် လွယ်ကူစွာ မဲပေးနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ဧပြီလ ၂၉ ရက် မှ ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့အထိ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတွင် ကျင်းပသွားမည့် The Voice Myanmar ၏ တိုက်ရိုက်သီဆို ယှဉ်ပြိုင်မှု ပွဲစဉ်တွင် ပြိုင်ပွဲဝင်၂၄ ဦး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည် ဖြစ်သည်။
MPT သည် ပရိသတ်များက မိမိနှစ်သက်သဘောကျသည့် အဆိုတော်ကို thevoice.mptvote.com Web Portal မှ မဲပေးနိုင်ရန်အတွက် မိမိသုံးစွဲသလောက်သာ ကျသင့်မည့် Pay As You Go (PAYG) (သို့မဟုတ်) လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်မည့် Voting Pack များကို ရွေးချယ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ PAYG ကို ရွေးချယ်ထားသည့် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် တစ်မဲလျှင် ၁၆ ကျပ်နှုန်းဖြင့် Live ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလျှင် အများဆုံး ၃ကြိမ်အထိသာ မဲပေး နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ MPT အနေဖြင့် ပြိုင်ပွဲတွင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သည့် အဆိုတော်ကို မဲပေးနိုင်ရန်အတွက် Voting Pack ကိုလည်း မိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။ ထို Voting Pack သည် သုံးစွဲသူများ ကြိုက်သလောက် မဲပေးနိုင်သည့် အခွင့်အရေးရရှိမည်ဖြစ်ပြီး မဲ (၂၀) အတွက် ၃၁၅ ကျပ် (ကုန်သွယ်ခွန်ပါပြီး) သာကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် Voting Pack များကို ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံး အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Voting Pack အမျိုးအစားများ
Pack 1 ၇၉ ကျပ် (၅)မဲ
Pack2၁၅၈ ကျပ် (၁၀)မဲ
Pack3၃၁၅ ကျပ် မဲ(၂၀)
PAYG မဲတစ်မဲလျှင် ၁၆ ကျပ်နှုန်း Live ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလျှင် အများဆုံး (၃)မဲအထိ
MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က “The Voice Myanmar ကို အဓိက ကူညီပေးတဲ့သူအဖြစ် MPT အနေနဲ့ ပါဝင်ခွင့်ရလို့ အရမ်းပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုံးစွဲသူတွေအတွက် မဲပေးနိုင်မယ့် PAYG နဲ့ Voting Pack တွေကို ပံ့ပိုးပေးထားပြီး ပြိုင်ပွဲ Live လွှင့်နေချိန်မှာ ပရိသတ်တွေက အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူ မဲပေးနိုင်မှာပါ။ MPT အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ MPT ဆင်းမ်ကတ်ရဲ့ မြန်နှုန်းမြင့် 3G နဲ့ 4G LTE+ကို အင်တာနက်အသုံးပြုခပေးဖို့ မလိုဘဲ မဲပေးနိုင်ပါပြီ။ မြန်မာ့ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေပန်းအစားဆုံးသီချင်း ဆိုပြိုင်ပွဲကို အားပေးကြည့်ရှုရင်း ဧပြီလ ၂၉ ရက်ကနေ ဇွန်လ ၃ရက်နေ့ အထိ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေတိုင်းမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အဆိုတော်ကို အားပေးနိုင်ပါပြီ ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
မဲစနစ်မှာ MPT မှ ကူညီထောက်ပ့ံဆောင်ရွက်ပေးထားသည့် အွန်လိုင်း Web Portal ဖြစ်သော thevoice.mptvote.com တွင်သာမဲပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ လင့်ခ်တွင် မဲပေးရမည့်စနစ်ကို ရှင်းပြထား သည့် ဗီဒီယိုလည်း ပါဝင်ပါသည်။ MPT ၏ မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်လိုင်းကို အသုံးပြု၍ ပရိသတ်များသည် Live လွှင့်နေစဉ်တွင် မိမိနှစ်သက်သည့် ပြိုင်ပွဲဝင်များကို ရွေးချယ်မဲပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်း Web Portal ကို အသုံးပြုမှုအတွက် ဒေတာအသုံးပြုခပေးစရာမလိုသည့်အပြင် Voting Pack မှ တစ်ဆင့် မဲဝယ်ယူနိုင်မှုကိုလည်း ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပေ။ PAYG အတွက်မှု Live ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလျှင် အများဆုံး (၃)မဲအထိ သာပေးနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။
The Voice Myanmar ၏ အကဲဖြတ် ဒိုင်တစ်ဦးဖြစ်သူ တေးသံရှင် နီနီခင်ဇော်က “The Voice ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲဟာ ကမ္ဘာပေါ်ကထင်ရှားတဲ့ရုပ်သံ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး တီဗွီမှာ ထုတ်လွှင့်တဲ့ အခြားပြိုင်ပွဲတွေ နဲ့ကွဲပြားခြား နားပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ တကယ့်ကို စစ်မှန်တဲ့အသံတစ်ခုတည်း ကိုပဲ ကြည့်ပြီးရွေးချယ်ပေးလို့ပါပဲ။ နီနီအနေနဲ့ ဒီ The Voice Myanmar ပြိုင်ပွဲမှာအကဲဖြတ်သူ တစ်ယောက် သက်သက်မဟုတ်ဘဲ အနာဂတ်ရဲ့ တောက်ပလာမယ့်ကြယ်ပွင့်တွေကို သူတို့ရဲ့ အရည်အသွေးတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေမှု တွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေဖို့အတွက် လမ်းညွှန်ထိန်းကျောင်းပေးရတဲ့ အလုပ်ကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေး ရတာပါ။ အခုလို ယှဉ်ပြိုင်မှုပြင်းထန်လာတဲ့ ပြိုင်ပွဲအဆင့်တွေမှာ နီနီတို့လို အကဲဖြတ်သူတွေအတွက်သာမက ပရိသတ််တွေအတွက်ပါ တကယ်ပဲစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို MPT ရဲ့ မဲပေးတဲ့ စနစ်နဲ့အတူ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ မိမိတို့အိမ်ကကြည့်နေစဉ်အချိန်မှာပဲ အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီမဲပေးနိုင်မှာဖြစ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် The Voice Myanmar ကို မလွတ်တမ်းစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့နဲ့ မိမိတို့နှစ်သက်တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုမဲပေးကြဖို့အတွက် တိုက်တွန်းလိုပါတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက MPT ၏ Call Center နံပါတ် ၁၀၆ သို့ခေါ်ဆိုခြင်း သို့မဟုတ် MPT ၏ တရားဝင် ၀က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည့် www.mpt.com.mm သို့မဟုတ် တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာ https://www.facebook.com/mptofficialpage သို့ဆက်သွယ်၍ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဧပြီ 23, 2018 မေ 2, 2018 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT Club old MM
MPT Club ဆိုတာဘာလဲ။
MPT Club ဆိုသည်မှာ MPT သုံးစွဲသူတိုင်း ဆုလက်ဆောင်များရရှိမည့်အစီအစဥ်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအစီအစဥ်သည် MPT သုံးစွဲသူများအား ယခုထက်ပို၍ အတွေ့အကြုံကောင်းများအားရရှိခံစားစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် MPT သုံးစွဲသူဖြစ်ပါက MPT နှင့် MPT ၏မိတ်ဖက်ဆိုင်များမှပေးသည့် လျှော့စျေးနှင့်ဆုလက်ဆောင်များအား ရယူနိုင်ရန် MPT club သို့စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
MPT Club မှ အထူးခံစားခွင့် သုံးမျိုး ရရှိနိုင်ပါသည်။
၁။ MPT Point reward
အသုံးပြုလိုက်သော ဖုန်းငွေပမာဏအပေါ်မူတည်၍ သတ်မှတ်ထားသောအဆင့်အလိုက် MPT Point များရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းရရှိလာသော MPT Point များကို MPT ၏ ဝန်ဆောင်မှု များ(သို့) MPT ၏မိတ်ဖက်ဆိုင်များတွင် သတ်မှတ်ထားသောပစ္စည်းများကို MPT Point များဖြင့်လဲလှယ်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ Lucky5reward
လတိုင်း၏ ၅ရက်၊ ၁၅ရက်၊ ၂၅ရက်များတွင် MPT ၏မိတ်ဖက်ဆိုင်များ၌ MPT Club ID ပြ၍ အထူးအခွင့်အရေးများရယူ နိုင်ပါသည်။
၃။ Membership level reward
MPT Club အဖွဲ့၀င်ဖြစ်ရန် မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
MPT Point တွေကိုဘယ်လို ရမလဲ။
မိမိအသုံးပြုလိုက်သော ဖုန်းငွေပမာဏအပေါ်မူတည်၍ MPT point များကို အနည်းဆုံး 1 point မှစတင်၍ သင်၏စာရင်းထဲသို့ နေ့စဥ်ထည့်သွင်းပေး မည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍မိမိသုံးစွဲလိုက်သော ဖုန်းငွေပမာဏသည် 1 pointစုဆောင်း ရန် မပြည့်မီပါက နောက်နေ့များတွင်သုံံးစွဲလိုက်သော ဖုန်းငွေပမာဏ အပေါ် ရရှိသော Point များနှင့်ပေါင်းစပ်၍ Point များကို စာရင်းထဲသို့ ထည့်သွင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
မိမိရောက်ရှိနေသောအဆင့်အလိုက် MPT point များရရှိမှုမှာကွဲပြားခြားနားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
MPT Club အစီအစဉ်မှာ ဘယ်လိုပါဝင်မလဲ။
၁။ MPT ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝယ်ယူခြင်း (သို့) မိတ်ဖက် ဆိုင်များ၏ ထုတ်ကုန်များကိုဝယ်ယူခြင်း ဖြင့် MPT ပွိုင့်များကိုစုဆောင်းပါ။
၂။ ထိုပွိုင့်များဖြင့် MPT ဝန်ဆောင်မှုများကို လဲလှယ်ခြင်း (သို့) မိတ်ဖက်ဆိုင်များ ၏ ထုတ်ကုန်များကို လဲလှယ်ခြင်း တို့ကိုပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
What is lucky 5?
Lucky5is the rewards program for MPT club member on 5th ,15th ,25th of the month.
၁။ MPT Club သို့စာရင်းပေးသွင်း ခြင်းဖြင့် MPT Club member ID ကိုရယူနိုင်ပါသည်။
– USSD ကို *345# ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင်သော်လည်းကောင်း
– SMS – 345 သို စာတိုခြင်း ဖြင်သော်လည်းကောင်း
၂။ Lucky5အတွက် သင်၏ member ID ကိုပြ၍သော်လည်းကောင်း၊ ဘောက်ချာကိုပြ၍သော်လည်းကောင်း လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။ သင်၏ဘောက်ချာကန့်သတ်ရက်ထက်မကျော်လွန်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
MPT Club အဖွဲ့၀င်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာဘာလဲ။
MPT အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် MPT Club သို့အဖွဲ့၀င်ရန် စာရင်းပေးသွင်းပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် MPT Club မှပေးသော ဆုလက်ဆောင်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအားရရှိခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော ၃လ ပျမ်းမျှအသုံးပြုလိုက်သော ငွေပမာဏအပေါ်မူတည်၍ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် သက်ဆိုင်ရာအဆင့်သက်မှတ်ချက်များ ကွာခြား သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော ၃ လ ပျမ်းမျှ ၃၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် အသုံးပြုခဲ့ပါက သင်သည် Diamond level ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
MPT မှ ကျယ်ပြန့်သော မိတ်ဖက်ဆိုင်မျိုးစုံ ကို သင်တို့အတွက် ထားရှိထားပါတယ်။ သင်တို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး အတွေ့အကြုံ များကို MPT နှင့် အတူခံစားလိုက်ရအောင်။
MPT Point (Gift & Redeem)
MPT SIM Card အသုံးပြုနေသူ (active customer) များအားလုံး MPT Club အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ (GSM/WCDMA/CDMA ဖုန်းများ၏ Prepaid စနစ်(သို့) Postpaid စနစ်အသုံးပြုနေသူများအားလုံး)
အောက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများအနက်မှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တစ်မျိုးကိုသုံး၍ တစ်ကြိမ်လျှောက်ထားရုံဖြင့် MPT Point အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
(က) USSD ကို အသုံးပြုခြင်းနည်းလမ်း – *345# ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် MPT Club အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
(ခ) SMS ကို အသုံးပြုခြင်းနည်းလမ်း – 345သို့ REG M/F ဟု စာတို(SMS)ပေးပို့ခြင်းဖြင့် MPT Club အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဧပြီ 20, 2018 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 25, 2020 Categories Personal Pagemm
MPT အသုံးပြုသူတိုင်း iflix အား ၁၂ လတာကြည့်ရှုခွင့်ရရှိမည်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၉ ရက်) – မြန်မာ့ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ MPT က ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်းဖျော်ဖြေရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော iflix နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုက်သည့် ဖျော်ဖြေရေး ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကို စတင်လိုက်ကြောင်း ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ယခုကဲ့သို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ရုပ်သံ အစီအစဉ်များ၊ အမိုက်စားရုပ်ရှင် နှင့် ဇာတ်လမ်းတွဲများကို ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များ ပေါ်မှတစ်ဆင့် ၃၆,၀၀၀ ကျပ်တန်ဖိုးရှိသော iflix ကို ၁၂ လ လစဉ်ကြေးပေးစရာမလိုဘဲ ကြည့်ရှုခွင့်ကို ရရှိနိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
iflix နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စတင်လိုက်သည့် ယနေ့မှစ၍ MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် 3G နှင့် 4G LTE+ မိုဘိုင်းလ်ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ဗီဒီယိုများကို အကန့်အသတ်မရှိ မိမိတို့၏ မိုဘိုင်းလ်ဒေတာမှတစ်ဆင့် လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ MPT သုံးစွဲသူတိုင်း iflix ၏ ဖျော်ဖြေရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ လက်ပ်တော့၊ Desktop အပြင် TV နှင့် အခြား ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် Device များပေါ်မှတစ်ဆင် Device ၂ ခုအထိ တစ်ပြိုင်တည်း ချိတ်ဆက်ကြည့်ရှုနိုင် မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဒေါင်းလုတ်ရယူထားပြီးနောက် Offline ဖြင့် ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက် လည်းပါဝင်သဖြင့် MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ရုပ်သံတီဗွီအစီအစဉ်များ၊ ရုပ်ရှင်များကို အင်တာနက်ချိတ် ဆက်ထားခြင်း မရှိသည့် အချိန်များ၌ပင် ဖုန်း၊ တက်ဘလက် နှင့် အခြား Devices များတွင် ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
MPT-KSGM Joint Operations မှ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က “ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍပုံစံဟာ ပြောင်းလဲလာပြီး အခုဆိုရင် ကိုယ့် အကြိုက်ဆုံးအကြောင်းအရာတွေကို အင်တာနက်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေကတစ်ဆင့် ကြည့်ရှုနိုင်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ MPT အနေနဲ့ “ရှေ့သို့လှမ်းချီ မြန်မာပြည်” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့ အညီ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကြောင့် iflix နဲ့ ကျွန်တောတို့ ယခုလိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးစွဲသူတွေကို မြန်နှုန်းမြင့် 3G နဲ့ 4G LTE+ မိုဘိုင်းလ် ကွန်ရက်ကတစ်ဆင့် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ရုပ်ရှင်တွေကို ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာမဆို ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့နဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍတွေကို အရောက်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်လို့ အရမ်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ MPT သုံးစွဲသူတွေအတွက် အနာဂတ် မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံတွေကို ပိုမိုထိတွေ့ခံစား နိုင်ဖို့ ယခုထက်ပိုပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ယူဆောင်လာပေးဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုပေါင်း ၂၂၀ ကျော် အပါအဝင် ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ ထုတ်ဝေသူများစွာ ပူးပေါင်းထားသည့် iflix ကို ရယူသုံးစွဲသူများအတွက် များပြားလှသော ခံစားမှုအတွေ့အကြံုများကို ပေးစွမ်းနိုင်မည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရုပ်ရှင်နှင့် ဇာတ်လမ်းတွဲများအပြင်၊ The Flash, Arrow, Mr. Robot, Vampire Diaries နှင့် Big Bang Theory ကဲ့သို့ ယခုလက်ရှိ နာမည်ကျော်လူကြိုက်များသော ဟောလိ၀ုဒ် ထိပ်တန်းဇာတ်လမ်းတွဲများ၊ ရိုက်လိုက်ပါဦ ဒုန်း.. ဒုန်း.. ဒုန်း၊ မင်္ဂလာရှိတဲ့အရပ်၊ ပန်းနှစ်ပွင့်စီးချင်း အစရှိသော ရုပ်ရှင်ပရိသတ်များ နှစ်သက်ကြမည့် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပရုပ်ရှင်များကို ခံစား စီးမျောနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
iflix ၏ ရုပ်သံလိုင်းအသစ်များသည် သုံးစွဲသူများ ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်သည့် ဖျော်ဖြေရေးစတူဒီယိုများ၊ အမှတ်တံဆိပ်များမှ ရုပ်သံဇာတ်လမ်း များကို ရယူထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲသူများမှ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် ရုပ်သံအစီအစဉ်၊ ရုပ်ရှင်နှင့် ရုပ်သံလိုင်းများကို iflix မူရင်း စာမျက်နှာတွင် အသင့်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်ရွေးချယ်ထားနိုင်ပြီး နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်များဖြစ်သည့် ဖွေးဖွေး၊ လူမင်း၊ သားညီ၊ ထွန်းကိုကို နှင့် အခြားသော သရုပ်ဆောင်များက ရွေးချယ်ထားသည့် Playlist များကိုလည်း Follow လုပ်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
iflix အင်ဒိုချိုင်းနား၏ General Manager ဖြစ်သူ Ms. Adeana Greenlee က “မြန်မာနိုင်ငံမှာ MPT နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုက်တာက အကြီးမားဆုံး မှတ်တိုင်တစ်ခုအဖြစ် စာရင်းဝင်သွားပါပြီ။ MPT သုံးစွဲသူ တွေအတွက် ကျွန်မတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်နိုင်ခဲ့လို့ အရမ်း ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ MPT သုံးစွဲသူတွေအတွက် iflix က ပရိသတ်တောင်းဆိုမှု များပြားလှတဲ့ နိုင်ငံတကာ၊ ဒေသတွင်းနဲ့ ပြည်တွင်း ရုပ်သံ အစီအစဉ်တွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေနဲ့အတူ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍများကို ဆောင်ယူလာပါပြီ” ဟု ပြောကြား ခဲ့သည်။
MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက် သို့မဟုတ် TV များကိုအသုံးပြု၍ ဖျော်ဖြေရေး ကဏ္ဍများကို အခမဲ့ရယူနိုင်ရန်အတွက် iflix အက်ပလီကေးရှင်းကို Google Play သို့မဟုတ် App Store များတွင် ဒေါင်းလုတ် ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုဝန်ဆောင်မှုကို MPT ဆင်းမ်ကတ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် MPT မှ ကူညီပံ့ပိုုးပေးထားသည့် ၁၂ လစာ ငွေကျပ် ၃၆,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိသည့် iflix ၏ ဖျော်ဖြေရေး ၀န်ဆောင်မှုများကို MPT ဆင်းမ်ကတ်ပေါ်မှတစ်ဆင့် မိမိတို့၏ဖုန်းဘေလ်ဖြင့် ကြည့်ရှုခံစား နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ၂၀၁၈ ဧပြီ ၉ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၈ ဇူလိုင် ရ ရက်နေ့အထိ ဤအစီအစဉ်ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက် အသုံးပြုခ ကျသင့်ပါမည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက *5050# သို့ ခေါ်ဆို၍ iflix အက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုတ်ရယူခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ MPT ၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာ သို့မဟုတ် Call Center နံပါတ် 106 သို့ ခေါ်ဆို၍လည်းကောင်း လေ့လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါတွင် အာရှ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဖရိကတို့ရှိ နိုင်ငံ ၂၆ နိုင်ငံ ရှိ လူပေါင်း ၁ ဘီလီကျော်မှ လက်ရှိသုံးစွဲနေသာ iflix သည် ဗီဒီယိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုမှုနယ်ပယ်တွင် စျေးကွက်ဦးဆောင်သူ အဖြစ် ထင်ထင်ရှားရှား ရပ်တည်နေပြီဖြစ်သည်။ iflix တွင်သီးသန့်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် ရုပ်ရှင်များ နှင့် ဆုရအစီ အစဉ်များ အပါအဝင် ဟောလိဝုဒ်၊ ဒေသတွင်းနှင့် ပြည်တွင်း ရုပ်ရှင်များ ပါဝင်သည့် ရုပ်ရှင်စုစည်းမှုကြီးကို အသုံးပြုသူများ အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးထားပြီး iflix ကို ဖုန်း၊ လက်ပ်တော့၊ တက်ဘလက်နှင့် တီဗီတို့ဖြင့် အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဧပြီ 9, 2018 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
Author MPT TelecommunicationPosted on ဧပြီ 6, 2018 ဧပြီ 6, 2018 Categories CSR Activitiesmm, Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT ဆင်းကတ်အဟောင်းအသုံးပြုသူများ ထပ်တိုးရရှိမည့် ဒေတာအပိုလက်ဆောင်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂ ဧပြီ ၂၀၁၈) – မြန်မာ့ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သည့် MPT က 2G နှင့် 3G စနစ်ကိုသာ အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည့် ဆင်းမ် ကတ် သုံးစွဲသူများအတွက် ၎င်းတို့၏ ဆင်းကတ်များကို MPT အရောင်းဆိုင်များတွင် လာရောက်လဲလှယ်ပါက တစ်ထောင်ကျပ် စတင်ငွေဖြည့်အသုံးပြုပြီးတိုင်း 100MB ဒေတာလက်ဆောင် အပိုရရှိမည့် အထူးအစီအစဉ် တစ်ခုကို ယနေ့ စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါသည်။
MPT ၏ မြန်နှုန်းမြင့် 3G နှင့် 4G LTE+ ကွန်ရက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ရှိ သုံးစွဲသူများအတွက် အရည်အသွေးမြင့် မားလှသည့် အမြန်နှုန်းနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဖုန်းချိတ်ဆက်ခေါ်ဆိုမှုတို့ဖြင့် မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းရှိ သုံးစွဲသူများသို့ ဝန်ဆောင်မှုများပေးအပ်လျက်ရှိ ပါသည်။ မိုဘိုင်းလ်ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးကိုရရှိစေရန် USIM လိုအပ်လျက်ရှိနေပြီး MPT သုံးစွဲသူ အများစုကလည်း လက်ရှိတွင် USIM ကို အသုံးပြုလျက် ရှိနေကြပါသည်။ 3G ၊ HSPA ၊ 4G LTE+ ကွန်ရက်များကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် USIM မှာ အသင့်အနေအထားတွင်ရှိပြီး ယင်းဆင်းမ်ကတ်မှာ ပိုမိုလုံခြုံ စိတ်ချရသကဲ့သို့ မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေများကို ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ မှတ်သားနိုင်သည့် နေရာ ပမာဏလည်း ပိုမို ပါဝင်လာမည်ဖြစ်သည်။
USIM ကို အဆင့်မြှင့်တင် အသုံးမပြုရသေးသည့် သုံးစွဲသူများအတွက် MPT က အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုကို ယခုလို လုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ USIM ကို စတင်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် USIM ကို လဲလှယ်၍ (၇) ရက်အတွင်း ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် ဖြည့်သွင်းအသုံးပြုပါက ငွေဖြည့်သည့်ပမာဏပေါ် မူတည်၍ ဒေတာလက်ဆောင်များ ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ ငွေဖြည့်ပမာဏအလိုက် ဒေတာလက်ဆောင်များကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ဒေတာအပိုလက်ဆောင် (MB) ကုန်ဆုံးရက်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် MPT မိုဘိုင်းလ်ဒေတာ ရရှိသုံးစွဲနိုင်သည့်နေရာဒေသများမှာ ယခင်ထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လျက်ရှိပြီး ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈ အမီ မြို့ကြီး/မြို့နယ် ၂၈၀ သို့ ဖြန့်ကျက်ထားမည့် MPT ၏ ရည်မှန်းချက်မှာလည်း နီးကပ်လာပြီ ဖြစ်သည်။ ယခုအစီအစဉ်မှာ လျင်မြန်သည့် အင်တာနက်ဒေတာကို စမ်းသပ်သုံးစွဲဖူးသေးခြင်းမရှိသည့် MPT အသုံးပြုသူများအတွက် Facebook၊ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ သတင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး စသည့်တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအပါအဝင် အွန်လိုင်းပေါ်မှ အကျိုးအမြတ်များစွာကို ရယူနိုင်ရန်အတွက် အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ဒေတာအပိုလက်ဆောင်ရရှိရန် MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဆွေသဟာ၊ ရှယ်ပြော၊ ရွှေစကားကဲ့သို့ အစီအစဉ် များ ရယူထားရန် လိုအပ်ပြီး လက်ရှိ USIM ကို အသုံးပြုနေပြီးဖြစ်သည့် သုံးစွဲသူများမှာ ယခုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ MPT ဆင်းကတ်အသစ်ကို လဲလှယ်၍ ဒေတာအပိုလက်ဆောင်ရရှိရန် MPT အရောင်း ဆိုင်များ သို့မဟုတ် ၁၀၆ သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဧပြီ 3, 2018 ဧပြီ 3, 2018 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
ပရိုမိုးရှင်းနှုန်းထားကို အောက်ပါအတိုင်း နိုင်ငံအလိုက် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊မကာအို၊ ထိုင်ဝမ်၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ ၊ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ဘရူနိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား 15 Ks/MB
ပိုမိုသက်သာေသာ နှုန်းထားြဖင့် Roaming rate cutter
9 Ks/MB ဖြင့် (၇)ရက်စာ ၉၀၀ ကျပ်
ဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယား၊အိန္ဒိယ၊သီရိလင်္ကာ၊သြစတေးလျ၊အမေရိကန် 50 Ks/MB
ဟန်ေဂရီ၊ဂျာမနီ၊ျပင္သစ္၊ဖင်လန်၊ဒိန်းမတ် 50 Ks/MB
(နှုန်းထားများသည် အခွန် ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်)
၂။ ပရိုမိုးရှင်းမပါဝင်တဲ့ ပုံမှန်နှုန်းထားဆိုတာဘာပါလဲ။
ပုံမှန်နှုန်းထားကို နိုင်ငံအလိုက် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်းမှာ ပိုမိုသက်သာသော နှုန်းထားဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
စာရင်းပေးသွင်းရန် လိုအပ်မှုမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
Promotion စာရင်းေပးသွင်းြခင်း သက်တမ်း
(Rate cutter) လိုအပ်ပါသည် ၇ရက်
(10000 Ks) လိုအပ်ပါသည် ၇ရက်
Paygo Promotion မလိုအပ်ပါ –
၄။ ပရိုမိုရှင်း သည် Postpaid သို့မဟုတ် Prepaidသုံးစွဲသူများအတွက် အကျုံးဝင်ပါသလား။
MPT GSM/WCDMA Prepaid and Postpaid သုံးစွဲသူများအတွက်အကျုံးဝင်ပါသည်။
သို့သော် Postpaid သုံးစွဲသူများသည် Roaming ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူရန်အတွက်
ကြိုတင်ငွေများကိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် MPT Brand Stores များမှ လည်းကောင်း၊ B2B/Corporate များအတွက် Account Managers များမှ တစ်ဆင့်လည်းကောင်း ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
၅။ ပရိုမိုရှင်း ကာလအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထားများ ပြောင်းလဲထားပါသလား။
သုံးသလောက်ပေး အင်တာနက်နှုန်းထားသာ ပြောင်းလဲထားပါသည်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်းစသည့် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကို တန်ဖိုးပြောင်းလဲထားခြင်း မရှိပါ။
၆။ ပရိုမိုးရှင်းသက်တမ်းက ဘယ်အချိန်ထိပါလဲ။
Promotion ကာလမှာ ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက် မှ နောက်ထပ် မကြေညာမီအချိန်အထိ
၇။ ပရိုမိုးရှင်းနှုန်းထားက နိုင်ငံအကုန်လုံးမှာ ရပါသလား။
မရပါ။ သတ်မှတ်ထားသည့် နိုင်ငံများတွင်သာ ရရှိနိုင်ပါသည်။
၈။ 9Ks/MB ပရိုမိုးရှင်းဆိုတာ ဘာပါလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်လျှင် ရရှိနိုင်မည့် Roaming Package ဖြစ်ပါသည်။
တန်ဖိုး ၉၀၀ ကျပ်
သက်တမ်း ၇ ရက်
ရရှိနိုင်ေသာ နိုင်ငံများ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊မကာအို၊ ထိုင်ဝမ်၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ ၊ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ဘရူနိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား
၉။9Ks/MB ပရိုမိုးရှင်းအတွက် စာရင်းပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါသလား။
စာရင်းပေးသွင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အခွန်အပါအဝင် တစ်ပတ်လျှင် ၉၀၀ ကျပ်ကျသင့်ပါမည်။
၁၀။ ယခု 9Ks/MB ပရိုမိုးရှင်းသည် Postpaid သို့မဟုတ် Prepaid သုံးစွဲသူများအတွက် အကျုံးဝင်ပါသလား။
MPT GSM/WCDMA Prepaid and Postpaid သုံးစွဲသူများအတွက်
အကျုံးဝင်ပါသည်။ သို့သော် Postpaid သုံးစွဲသူများသည် Roaming ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူရန်အတွက်
ကြိုတင်ငွေများကိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် MPT Own Shops / MPT TRA Offices များမှ လည်းကောင်း၊ B2B/Corporate များအတွက် Account Managers များမှ တစ်ဆင့်လည်းကောင်း ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
၁၁။ Package ကိုဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲ။
Package ကိုအောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
 1332 သို့ “NINE” ဟု စာတိုပေးပို့၍ ဖြစ်စေ
 *9007# သို့ခေါ်ဆို၍ဖြစ်စေ
 *106*2*5*2# သို့ခေါ်ဆို၍ဖြစ်စေ
 From MPT4U > Package Purchase > Others > Roaming & IDD
 နီးစပ်ရာ retailer များကို သွားရောက်မေးမြန်း၍ DMS မှ တစ်ဆင့်လည်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၁၂။ ၇ရက်စာ Roaming rate cutter pack ဝယ်ထားပါတယ်။ နောက်ထပ် ၇ရက်စာ 10000Ks/800MB Roaming pack ဝယ်ချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်ပါမလဲ။
ဝယ်ယူ၍ မရပါ။ မူလ ဝယ်ယူထားသော ၇ရက်စာ Roaming rate cutter pack သက်တမ်းမကုန်မချင်း နောက်ထပ် 10000Ks/800MB roaming pack ဝယ်ယူ၍မရနိုင်ပါ။ မူလ ဝယ်ယူထားသော Roaming rate cutter pack သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးမှသာ ဝယ်ယူနိုင်ပါမည်။
၁၃။ Roaming Rate cutter pack ဝယ်ယူထားပါတယ်။ သုံးစွဲနိုင်သော သက်တမ်းနှင့် ပမာဏ ကျန်ရှိချိန်မှာ နောက်ထပ် Raoming Rate cutter pack ကို ထပ်မံ ဝယ်ယူလိုပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်ပါမလဲ။
ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ။ မူလ ဝယ်ယူထားသော Roaming Rate cutter pack ၏ သက်တမ်းနှင့် ပမာဏ ကျန်ရှိနေချိန်တွင် နောက်ထပ် rate cutter pack ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ။ မူလ Roaming Rate cutter pack ၏ ပမာဏ နှင့် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးမှသာ ဝယ်ယူနိုင်ပါမည်။
၁၄။ အထက်ဖော်ပြပါနှုန်းထားသည် ဒေတာတစ်ခုအတွက်သာဖြစ်ပါသလား။
ဒေတာနှုန်းထားအတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်းအတွက် ပုံမှန်နှုန်းထားများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၁၅။ Package ဝယ်ယူရရှိပြီးကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
Package ဝယ်ယူပြီးသည့်နောက် အတည်ပြုစာတိုကို လက်ခံရရှိပါမည်။
၁၆။ ထိုနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်မလည်ပတ်ခင် Roaming Package ကို စာရင်းပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါသလား။
မလိုအပ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် Package အသုံးပြုနိုင်သည့် နိုင်ငံများအားလုံးတွင် အဆိုပါ Package ကို ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
၁၇။ ထိုနိုင်ငံများအတွက် ယခု Package ကိုမဝယ်ယူချင်ပါက အခြားပရိုမိုးရှင်းများရှိပါသလား။
အဆိုပါ package ကို မဝယ်ယူချင်ပါက ထို ၁၂ နိုင်ငံ (ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊ မကာအို၊ ထိုင်ဝမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နမ်၊လာအို၊ဘရှုနိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား ) အတွက် 15Ks/MB သုံးသလောက်ပေး အင်တာနက်နှုန်းထားဖြင့် ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
15 Ks မှ 9Ks ဖြင့် ၄၀% သက်သာသော အဆိုပါ အထူး Package ကို ဝယ်ယူရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
၁၈။ Package သက်တမ်းကုန်ဆုံးလျှင် ဘယ်လိုသိနိုင်ပါမလဲ။
Package သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပါက စာတိုပေးပို့ အကြောင်းကြားပါမည်။
Package ထပ်မံဝယ်ယူမှုမပြုလုပ်လိုပါက သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက် 15Ks/MB ဖြင့် ကောက်ခံသွားပါမည်။
၁၉။ Package ဝယ်ယူ၍ မရပါ။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
လက်ကျန်ငွေ မလုံလောက်၍ ဖြစ်စေ
Base Tariff သုံးစွဲသူဖြစ်နေ၍ဖြစ်စေ
လက်ရှိ Roamng Package ဝယ်ယူထား၍ဖြစ်စေ ဝယ်ယူ၍မရနိုင်ပါ။
၂၀။ ၇ရက်စာ 10000 Ks/800 MB Roaming pack ဝယ်ထားပါတယ်။ နောက်ထပ် ၇ရက်စာ Roaming Rate cutter pack ဝယ်ချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်ပါမလဲ။
ဝယ်ယူ၍ မရပါ။ မူလ ဝယ်ယူထားသော ၇ရက်စာ 10000 Ks/800 MB Roaming pack သက်တမ်းမကုန်မချင်း နောက်ထပ် Roaming Rate cutter pack ဝယ်ယူ၍မရနိုင်ပါ။ မူလ ဝယ်ယူထားသော ၇ရက်စာ 10000Ks/800 MB Roaming pack သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးမှသာ ဝယ်ယူနိုင်ပါမည်။
၂၁။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်ပါမလဲ။
သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါက SMS ဖြင့်အသိပေးအကြောင်းကြားပါမည်။
၂၂။ Roaming အသုံးပြုစဉ် ဖြတ်တောက်သည့်နှုန်းထား ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါသလဲ။
50Kb လျှင် တစ်ကြိမ်ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၃။ ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုမှ international roaming ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သော နိုင်ငံတကာသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်း နှင့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုမှ international roaming ဝန်ဆောင်မှုများ မရရှိနိုင်ပါ။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဧပြီ 3, 2018 ဇန်နဝါရီ 19, 2021 Categories Personal Pagemm
(ရန်ကုန်၊၂၀၁၈ခုနှစ် ဧပြီလ ၃ ရက်) – မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးကာလအတွင်း နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ခရီးသွားလာကြမည့် MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် MPT ဆင်းမ်ကတ်ဖြင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း (International Data Roaming) များအတွက် နှစ်သစ်ကူးအထူးစီအစဉ်အနေဖြင့် အထူးစျေးနှုန်းသို့ လျော့ချပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း MPT က ယနေ့ သတင်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ယခုအစီအစဉ်အသစ်တွင် MPT အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ပြည်ပခရီးစဉ်တစ်လျောက် မိမိတို့၏ မိသားစုဝင်များနှင့် မိတ်ဆွေများထံသို့ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အစဉ်ချိတ်ဆက်နေနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အင်တာနက်ကို စျေးကွက်အတွင်း အသက်သာဆုံး နှုန်းထားတစ်ခုဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယခုအစီအစဉ်သစ်အရ အချို့နိုင်ငံများတွင် အင်တာနက်ကို 1MB လျှင် ၁၅ ကျပ် နှုန်းထားဖြင့် သုံးစွဲမှုအတိုင်းသာကျသင့်မည့်အစီအစဉ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သလို သတ်မှတ်ထားသည့် ခရီးစဉ်ကာလကို သိရှိပြီးသူများအနေဖြင့်လည်း 800MB ကို ၁၀၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် မိမိတို့နှစ်သက်သလို ရွေးချယ်၍ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ မတ်လ ၃၁ရက်နေ့မှ ဧပြီ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပြီး 800MB အစီအစဉ်ကို ဝယ်ယူထားသူများအနေဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မပါဝင်ပါက 1MB လျှင် ၁၁.၉ ကျပ်ဖြင့် အလွန်သက်သာသည့် နှုန်းထားတစ်ခုအဖြစ် ရယူအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ MPT အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ယခုအစီအစဉ်ကို ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ တရုတ်နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံများတွင် ရယူသုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဆွေသဟာ၊ ရှယ်ပြော နှင့်ရွှေစကား အစီအစဉ်များ ရယူထားသူ MPT GSM/WCDMA အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ယခုအစီအစဉ်ကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 800MB လျှင် ၁၀,၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူရန်အတွက် *8007# (သို့) *106*2*5# (သို့မဟုတ်) 1332 သို့ “ROAM”ဟု မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်စေ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ဖြစ်စေ ခေါ်ဆို ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယခုလို International Data Roaming နှုန်းထားအစီအစဉ်များကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
သုံးစွဲမှုအတိုင်း ကျသင့်မည့် အစီအစဉ်
ဝန်ဆောင်ခ 1MB လျှင် ၁၅ ကျပ် 800MB လျှင် ၁၀၀၀၀ ကျပ်
အသုံးပြုနိုင်သူများ MPT ၏ GSM/WCDMA အသုံးပြုသူများ MPT ၏ GSM/ WCDMA (ဆွေသဟာ၊ ရှယ်ပြော၊ ရွှေစကား) အသုံးပြုသူများ
အသုံးပြုနိုင်မည့်နိုင်ငံများ ထိုင်း၊ မလေးရှာ၊ တရုတ် (ထိုင်ဝမ်၊ ဟောင်ကောင်၊ မကာအိုမှ လွဲ၍)၊ စင်ကာပူ
ပရိုမိုးရှင်းသက်တမ်း ၃၁ မတ် ၂၀၁၈ မှ ၃၀ ဧပြီ ၂၀၁၈ ၃၁ မတ် ၂၀၁၈ မှ ၃၀ ဧပြီ ၂၀၁၈
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် မရှိ ၇ ရက်တာ
မလို *8007# သို့မဟုတ် *106*2*5# ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုရန် သို့မဟုတ် 1332 သို့ “ROAM”ဟု SMS ပေးပို့ပေးရန်
အထူးအစီအစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာဖြင့် အကြီးကျယ်ဆုံး ကျင်းပသော နှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်ပွဲတော်ကာလနှင့် အချိန်ကိုက်ဖြစ်ပြီး ပွဲတော်ရက်ကာလအတွင်း နိုင်ငံရပ်ခြား ခရီးစဉ်များသို့ သွားရောက်ကြသူများအနေဖြင့် မိမိတို့ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေများနှင့် ဆက်သွယ်မှု မပြတ်တောက် စေရန် ရည်ရွယ်၍ MPT က ယခုအစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
MPT-KSGM Joint Operations မှ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က “ ကျွန်တော်တို့ MPT အနေနဲ့ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ တရုတ် နဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံတွေကို သွားရောက်လည်ပတ်ကြမယ့် MPT သုံးစွဲသူတွေအတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားက ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာတွေကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုစရာမလိုဘဲ စျေးအတန်ဆုံး ဒီအထူးအစီအစဉ်သစ်ကို 1MB ကို ၁၅ကျပ် နဲ့ မိတ်ဆက်နိုင်တဲ့အတွက် အရမ်းကို ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ နှစ်သစ် ကာလအတွက် အချိန်ကိုက် လုပ်ဆောင်ခွင့်ရလို့လည်း တကယ်ဝမ်းသာ မိပါတယ်။ MPT သုံးစွဲသူတွေက ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ MPT ဆင်းမ်ကတ်ကိုပဲသုံးပြီး အတန်ဆုံးစျေးနှုန်းနဲ့ မြန်မာပြည်က ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေဆီကို အဆက်အသွယ်မပြတ် ချိတ်ဆက်နေလို့ရပါပြီ။ ဒီနှုန်းထားဟာဆိုရင် မြန်မာပြည်က ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း တွေထဲမှာ အသက်သာဆုံးနဲ့ အတန်ဆုံး နှုန်းထားတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ MPT အနေနဲ့ သုံးစွဲသူတွေ လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကို အမြဲစဉ်းစား ဖြည့်ဆည်း ပေးနေတာဖြစ်လို့ ဒီအစီအစဉ်သစ်ကိုလည်း ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်လို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက MPT ၏ Call Centre နံပါတ် ၁၀၆ သို့ခေါ်ဆိုခြင်း သို့မဟုတ် MPT ၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည့် www.mpt.com.mm၊ သို့မဟုတ် တရားဝင် facebook စာမျက်နှာ https://www.facebook.com/mptofficialpage ဆိုဆက်သွယ်၍ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။